ဂျူနီယာဝင်း – သတင်းက ဘယ်လောက်များအရေးကြီးသလဲ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဂျူနီယာဝင်း – သတင်းက ဘယ်လောက်များအရေးကြီးသလဲ
အတွေးအမြင် အမှတ် ၃၁၂ သြဂုတ်လ (မိုးမခ) သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၈
သတင်းက ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ ဆုိုတဲ့မေးခွန်းက မေးစရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လူတွေက သတင်းစာဆရာတွေရဲ့ သတင်းတင်ပြမူပုိုင်းဆုိုင်ရာကုို ၀င်ရောက်ပတ်သက်မူ မရှိချင်ကြတာလဲ။
သတင်းဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပုိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တုို့ရဲ့ ဘ၀မှာ သတင်းကုို အပုိုင်း ၃ ပုိုင်းခွဲထားပေးပါတယ်။ အချက်အလက်ပေးခြင်း၊ ဖျော်ဖြေခြင်းနဲ့ လူထုကို ဆွဲဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ၃ခုက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပတ်သက်နေတယ်။ ပြောရရင် ရောယှက်နေတယ်လုို့တောင် ပြောလုို့ရပါတယ်။ တကယ့်ဘ၀မှာ တခါတရံ ခွဲထုတ်ဖုို့တောင် ခက်ခဲပါတယ်။
အချက်အလက်တွေက သတင်းမှာ တော်တော် အရေးပါတယ် ဆုိုတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။ သတင်းဟာ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ တကယ့်ဇာတ်လမ်းတွေကုို ပြောပြနေတာပါ။ ဒါဟာ ကျွန်တေ်ာတုို့တွေနဲ့ သက်ဆုိုင်တယ်၊ ကျွန်တော်တုို့အကြောင်းတွေကုို သိစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တုို့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ဝေးကွားတဲ့၊ လက်လှမ်းမမှီနုိုင်တဲ့ အဖြစ်တွေ၊ လူတွေ အကြောင်းကုို သိအောင်လုပ်ပေးတယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အကြောင်းတွေကုို လည်းတတ်နုိုင်သလောက် သိလာရတယ်ပေါ့။ သတင်းတွေဟာ အသိပညာကျယ်ပြန့်လာအောင်၊ ကျွန်တော်တုို့ တက်နေတဲ့ လှေကားထစ်တွေ တဆင့်ပြီးတဆင့် မြင့်တက်လာအောင် ဖြည့်စွမ်းပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တုို့နေထုိုင်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးက ဘယ်လုိုဟာမျိူးလဲ ဆုိုတာ သတင်းတွေကတဆင့် သိလာပါတယ်။
ကျွန်တော်တုို့က သတင်းတွေကုို ဖတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချနုိုင်တယ်။ ဥပမာ – မုိုးလေ၀သ သတင်း။ ဘယ်လုိုအ၀တ်အစားဝတ်သင့်သလဲ၊ ထီးယူမလား၊ စသဖြင့် မနက်ခင်း မုိုးလေ၀သ ဖတ်ပြီး ဆုံးဖြတ်လုို့ရတယ်။ တခါတလေ ခရီးသွားဖုို့ကိစ္စတွေမှာ မုိုးလေ၀သက အရေးကြီးလာတယ်။ မုန်တုိုင်းရှိသလား၊ မုန်တုိုင်း ကျော်သွားမယ့်နေရာဖြစ်နေသလား၊ မုန်တုိုင်း ပြီးသွားပလား၊ မုန်တုိုင်းကြောင့် သစ်ပင်တွေကျူိးကျလုို့ လမ်းတွေ ပိတ်ဆုို့နေလား။ သတင်းတွေဖတ်ပြီး ကျွန်တော်တုို့ရဲ့ အစီအစဉ်တွေ ပြောင်းလုို့ရတယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်း တွေကနေလည်း လတ်တလောသတင်းတွေ နားထောင်ပြီး အချိန်မှီ ရောက်ဖုို့ စဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဘေ့စ်ဘောအားကစားကုိုလည်း ထုိုင်ကြည့်ဖုို့အချိန်သတ်မှတ် လို့လည်း ရပါတယ်။
တခါတလေ သတင်းမီဒီယာတွေကုို ကျွုန်တော်တု်ိ့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှန်ကန်စေအောင် ဖြည့်စွမ်းပေးတဲ့အတွက် အမှတ်တွေ ပေးရပါတယ်။ ဥပမာ မဲထည့်ဖုို့ကိစ္စတွေမှာ ဘယ်သူ့ကုို မဲထည့်သင့်သလဲဆုိုတာကုို သတင်းတွေကြည့်ပြီး ဖတ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ် ဆုံးဖြတ်လို့ရစေတယ်။ ကြော်ငြာတွေကလည်း ဒီပစ္စည်းဝယ်သင့် မ၀ယ်သင့် စဉ်းစားလုို့ရအောင် အချက်အလက်တွေ ပေးထားတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တွေ့တဲ့အခါ အချင်းချင်း သတင်းထဲက အချက်အလက်တွေ ဆွေးနွေးလို့လည်းရ၊ ငြင်းခုန်လုို့လည်း ရပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေတွေကုို သတင်းတွေကနေ သိနုိုင်တဲ့အတွက် လူထုဟာ သတင်းနဲ့ မျက်ခြေမပြတ်အောင်နေနေကြရပါတယ်။ ဥပမာ စစ်အတွင်းတုန်းကဆုို လူတွေဟာ စုရုံးပြီး အတူတကွ ရေဒီယုိုကလေး နဘေးကနေ နားထောင်နေကြရတယ်။ လမ်းပေါ်က ထုတ်လွှင့်တဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းကို လမ်းသွားလမ်းလာတွေ စုကာ မတ်တပ်ရပ်လျုက် အတူတကွ ကြည့်ကြတယ်။ မဟာမိတ်တွေ ၀င်လာပြီလား၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေ တုိုက်ခုိုက်ခံနေရ ပီလား၊ ဘယ်နေရာမှာ ဗုံးကြဲခံနေရလား စသဖြင့် သတင်းတွေကုို ၀ုိုင်းကာ နားထောင်၊ ဖတ်ရူရင်း လူတွေ အချင်းချင်း အဖော်ပြုနေကြရတယ်။
အခုဆက်လက်ပြီးတော့ သတင်းရဲ့ ဒုတိယ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဖျော်ဖြေခြင်းကို ဆက်ပါ့မယ်။ ဖျော်ဖြေခြင်းဆုိုတဲ့ကိစ္စဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရေးပါတဲ့ အပုိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတော်တော်များများဟာ ကျွန်တော်တုို့ကုို တုိုက်ရုိုက်မပတ်သက် မသက်ဆုိုင်ပါဘူး။ သတင်းတုိုင်းဟာ ကျွန်တော်တုို့ရဲ့ဘ၀ကို ထိန်းချူပ်မထားပါဘူး။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆိုတာကလည်း ကျွန်တော်တို့က ကုိုယ့်ဘာသာကုိုယ် ချတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လုိုချပါ ဘယ်လိုလုပ်ပါလို့ ဘယ်သတင်းကမှ မပြောပါဘူး။ (သတင်းစာဆရာတွေရေးတဲ့ သတင်းတုိုင်းဟာ သူတုို့ကုိုယ်ပုိုင် အယူအဆ မပါရ၊ သူတုို့အာဘော်မပါရလို့ ရှေ့ကဆောင်းပါးများမှာ တင်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်။ သတင်းကုို ဖတ်ပြီး ထီးယူသင့်မသင့် ခရီးမသွားသင့် သွားသင့် ဆုိုတာက သင့်ဘာသာသင် ကိုယ်သွားမယ့်နေရာကို ကြည့်ပီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပါ။ အဲသလုိုပါပဲ တခြားသော သတင်းအမျိူးအစားတုိုင်းဟာလည်း အဲသည်သဘောအတုိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။)သတင်းကပေးတဲ့ အချက်အလက်တွေကုိုကြည့်ပြီး လူတွေက စဉ်းစားမယ်၊ တုိုင်ပင်မယ်၊ ဆုံးဖြတ်မယ်။
သတင်းထဲက ဖျော်ဖြေတဲ့ အပုိုင်းဟာ သတင်းစာဆရာတွေကြားထဲမှာ နှစ်များစွာ အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ စူပါမားကက်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေ၊ နံမယ်ကြီးတွေရဲ့သတင်းတွေ၊ လူမူထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းဟာ လူထုကုို ပေးနေတဲ့ ဖျော်ဖြေရေး သတင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လူတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ပမာဏ ကို တွက်ကြည့်တော့ ဖျော်ဖြေရေးအပို်င်းဟာ လူတွေ ပိုကြိုက်ကြ တာကို တွေ့ရတယ်။ သည်တော့ လူစိတ်ဝင်စားတာကုိုပဲ အဓိကထား တင်ဆက်နေကြမလား သတင်းအချက်အလက်တွေ ကုိုပဲ အပင်ပန်းခံပြီး သတင်းလုိုက်နေကြတာ တန်ရောတန်ရဲ့လား ဆုိုပြီး သတင်းစာဆရာတွေ အချင်းချင်း အငြင်းပွားစရာဖြစ်လာတာ ဆန်းတော့မဆန်းဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကမှာ အကြမ်းဖက်တုိုက်ခုိုက်ခံရမူ သတင်းဟာ ဖျော်ဖြေရေးသတင်းတွေကုို ကျော်တက်သွားတာတော့ လက်တွေ့ပါပဲ။
(တတိယ အစိတ်အပုိုင်းဖြစ်တဲ့ လူထုကို ဆွဲဆောင်မူဆုိုတာကုို စာရေးသူက အသေးစိတ်ထပ်ရှင်းပြမထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မှန်းကြည့်လိုက်တော့ ဒီအချက်ဟာ ရှေ့က အချက်၂ခုနဲ့ ရောယှက်နေပါတယ်။ သတင်းစာဖတ်သူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမူဟာ ဘာလဲဆုိုတာကုို သတင်းစာဆရာတွေ တင်ပြတဲ့ သတင်းတွေပေါ်မူတည်ပြီး အဖြေရှာနေတဲ့သဘောလုို့ ယူဆပါတယ်။)
သတင်းတွေကုိုဖတ်ပြီး လူထုဟာ စိတ်ဝင်စားလာမယ်၊ မေးစရာတွေ ပေါ်လာမယ်၊ အချင်းချင်း တုိုင်ပင်နှီးနှောချင်လာမယ်၊ စကားပြောစရာ အကြောင်းတွေ ရလာမယ် ဆိုရင် ဖျော်ဖြေရေးသတင်းဖြစ်ဖြစ်၊ အချက်အလက်တွေဖော်ပြတဲ့ သတင်းဖြစ်ဖြစ် ဒါကုို လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့သတင်းတွေ အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ အခု နုိုင်ငံရေးသတင်းတွေအကြောင်းကုို ဆက်ပါမယ်။
သတင်းတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရေးပါတယ် ဆုိုတာ ရှေ့မှာ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခုဆက်လက်ပြီး သတင်းတွေဟာ ကျွန်တော်တုို့ရဲ့ ကိုယ်ပုိုင်ဘ၀တွေထဲကုို ဘယ်လောက်အရေးပါလာသလဲ ဘယ်လုို အကျူိးသက်ရောက်မူတွေ ရှိသလဲ ဆုိုတာကုိုဆက်ပြောပါ့မယ်။ သည်တော့ ဥပမာလေးတွေနဲ့ပဲ တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နုိုင်ငံရေးအလုပ်ဆုိုတာဟာ ၉၀% အပြော၊ ၁၀% လှူပ်ရှားမူ လို့ဆုိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နုိုင်ငံရေးအများစုဟာ အကြံဥာဏ်တွေ၊ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေ၊ ယုံကြည်မူနဲ့ သွားနေပါတယ်။ မိမိရဲ့ အမြင်တွေကုိုတင်ပြတယ်၊ ငြင်းခုန်မယ်၊ တခြားသူတွေနဲ့ တုိုက်ခုိုက်မယ်၊ တခြားသူတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်မယ်။ ဒီအလုပ်က ညင်းခုန်၊ ဆွေးနွေး၊ ညှိနှိူင်း …. အဲသည်သဘော။ မှန်ပါတယ်။ နုိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများဟာ တနေရာကနေ တနေရာက မဟာမိတ်တွေဖွဲ့၊ လက်ဆွဲနှူတ်ဆက်၊ တဖက်သားကုို သိပ်ဂရုစုိုက်တဲ့ ပုံကုို မြင်သာထင်သာတွေ့ရတယ်ပေါ့။ သည်လုိုနဲ့ အမြင်ချင်းဖလှယ်မယ်၊ ဥပဒေတွေ ချမှတ်ဆွေးနွေးမယ်။ ဒီနေရာမှာ နုိုင်ငံရေးရဲ့ အဓိကအလုပ်က လူ့အဖွဲ့အစည်းကုို မဟာမိတ်တွေနဲ့ အတူတကွ အကြံဥာဏ်တွေ ထုတ်ကြ၊ ရွေးချယ်ကြတာပါပဲ။
သည်တော့ သတင်းစာဆရာတွေက ဘယ်သူကဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုးစားနေပြီ၊ ဘယ်သူကဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့မယ်၊ သူတုို့က သည်လုို စိတ်ကူးတွေရှိတယ်၊ သူတို့က ဘယ်လို အစီအမံတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတယ် စသဖြင့် သတင်းတွေလုိုက်ရ၊ ရေးရ၊ တင်ပြရပါတယ်။
သတင်းနဲ့ သတင်းမီဒီယာ ရဲ့ အဓိကအလုပ်တစ်ခုက အစုိုးရနဲ့ အစုိုးရအရာရှိတွေအပေါ်မှာ စောင့်ကြည့်ပြီး နုိုင်ငံရေးအမြင်တွေနဲ့ ရေးခြစ်ကြရတာပါပဲ။ ဥပမာအားဖြင့် ၁၉ ရာစု တုန်းက ဆုိုရင် လူထုပုိုက်ဆံတွေကုို ဘယ်လုိုသုံးစွဲသလဲ၊ ဖြုန်းတီးနေသလား၊ စီမံမူကဘယ်လုိုလဲ၊ ငွေရေးကြေးရေး အကျင့်ပျက်ခြစားမူတွ ရှိနေသလား ဆုိုတာတွေကုို သတင်းစာတုို့မဂ္ဂဇင်းတုို့မှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ ကြပါတယ်။ အဲသည်လုို ဖော်ပြမူတွေ တော်တော်များများမှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကြားက ပြဿနာတွေ ပါပါလာတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ – ကလေးလုပ်အားများ သုံးစွဲခုိုင်းစေမူများ – ဒါတွေကုို အစုိုးရက လစ်လျူရှူထားတယ် ဘာညာပေါ့။ သတင်းစာဆရာတွေက အစုိုးရလုပ်ငန်းတွေကုို စောင့်ကြည့်နေရင်းကနေ အဲသည်လုို ပြဿနာတွေကုို နုိုင်ငံရေးဆန်ဆန် မီးမောင်းထုိုးပြရင်းနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တင်ပြနုိုင်ကြပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာလည်း သည်လို တခါတရံ ပုံဝတ္ထုဆန်ဆန်တွေ ရေးသားဖော်ပြကြတာ တွေ့ကြရတယ်။
လူထုကုို နုိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကုို သိစေတာဟာ တနည်းအားဖြင့် လူတွေရဲ့ တုန့်ပြန်မူကုို ကြားကြရတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စမျိူးဆို လူထုနဲ့ သက်ဆုိုင်တယ်ဆိုတာမျိူးကုို သတင်းစာဆရာတွေက အရေးကောင်းရင်ကောင်းသလုို ထိရောက်ပါတယ်။ နုိုင်ငံရေးသမားတွေက အော်နေတာထက် ဘေးလူက၀င်ပြောရင် ပုိုနားဝင်တတ်ပါတယ်။ အဲသည်လုို ဘေးလူတစ်ယောက်ရဲ့ လုိုအပ်ချက်ကုို သတင်းစာဆရာတွေက ဖြည့်ဆည်းပေးနုိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သတင်းမီဒီယာတွေက လူထုဆီကစကားသံတွေကုို ဆွဲထုတ်ပေးတဲ့ တဖက်တလမ်း ကူညီမူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၄ နာရီ သတင်းမီဒီယာနဲ့ အင်တာနက်သတင်းတွေဟာ သတင်းအချက်အလက်တွေ ပေးတာထက် ဖောင်းပွမူတွေက ပုိုများနေပါတယ်။ နောက်တမျိူးပြောရရင် သတင်းဆုိုတဲ့ အရာက လုံလုံလောက်လောက် မပါဘူး။ သတင်းအဖွဲ့အစည်းတွေ မီဒီယာထုတ်လွှင့်မူ ဆုိုတာတွေကုို ကြည့်လုိုက်စမ်းပါ။ စကားလက်ဆုံပြောတဲ့ အခန်းဏ္ဍတွေ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမြင်ချင်းဖလှယ်ကြတာတွေ၊ ဖက်ရှင်ကဏ္ဍတွေ အဲဒါတွေက တော်တော်များနေပါတယ်။ အဲဒီလုိုအခြေအနေမှာ နုိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍတွေကုို ဆွေးနွေးကြ၊ နှီးနှောကြ စတဲ့ သဘောပါတဲ့ အခန်းတွေကုို ထည့်သွင်းကြပါတယ်။ အဲသည်ထဲ အပြင်လူတွေကလည်း ၀င်ပါလုိုက်ကြသေး။ အဲသည်လုိုတွေ လုပ်တာဟာ နုိုင်ငံရေးကုို မှေးမှိန်သွားစေတယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ ထင်ပါတယ်။ နုိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ လူထုကြားမှာ တံတားတစ်ခုကို ခင်းမယ်ဆုိုရင် တုိုတုိုနဲ့လုိုရင်းဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုခုကုို အဓိကထားပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ် အာရုံစုိုက်ပြီး တင်ပြပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရေရှည်အတွက် ပုိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
တဖန်လူ့အဖွဲ့အစည်းကုို ဖော်ဆောင်တဲ့ သတင်းဆုိုတဲ့အထဲမှာ စီးပွားရေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍ ကလည်း တော်တော်အရေးပါနေပါတယ်။ စားသုံးသူတွေအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပေးမယ့်၊ စဉ်းစားပေးမယ့် အချက်အလက်တွေ ပေးဖုို့ဟာလည်း အရေးကြီးတာကုိုး။ ဥပမာ သွားတုိုက်ဆေး ဘယ်တံဆိပ်ကောင်းသလဲ ဘာဝယ်ရမလဲ ဆုိုတာကအစပေါ့။ ဒါဟာလည်း သူတို့အတွက် ပိုက်ဆံကုန်ရမယ့် ကိစ္စဆုိုတော့ အရေးကြီးတာပေါ့။ တဖန် သတင်းတွေကနေ လူငယ်လူရွယ်ကလေးများ ဘယ်ကောလိပ် ဘယ်ကျောင်း တက်ရင်ကောင်းမလဲ ဆုိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ဖုိ့ အချက်အလက်တွေကို သိနုိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါတွေကုို သတင်းစာပညာနဲ့ ရေးသားလုိုက်တဲ့ သတင်းများကနေ သြဇာသက်ရောက်မူများစွာနဲ့ လူတွေဆီရောက်ရှိ နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတော်တော်များများဟာ သူတို့ရင်ဆုိုင်နေကြရတဲ့ ပြဿနာတွေကုို ဖြေရှင်းလုိုကြတယ်။ လုပ်ငန်းကုိုင်ခန်းတွေ၊ ကုမ္မဏီလုပ်ငန်းတွေ၊ ကိုယ်ပုိုင်လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေက သူတုို့ပုိုင်ဆုိုင်မူတွေ၊ အခွင့်အရေးတွေ ကာကွယ်လုိုကြတယ်။ ဒီလုိုအခြေအနေတွေမှာ ရှေ့နေရှေ့ရပ်တုို့၊ ဥပဒေပညာရှင်တုို့၊ တရားခွင် တုို့ဆုိုတာ ပါလာပြီ။ ဖျော်ဖြေရေးဆုိုတဲ့ ကဏ္ဍထဲမှာ သူများအကြောင်းတွေ ဝေေ၀ဆာဆာ တင်ပြလုို့ရတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ သတင်းတွေဟာလည်း နံမယ်ရပါတယ်။ လူတွေကလည်း ကုိုယ့်ဘ၀အခြေအနေတွေကို ခနမေ့ပြီး ဒီလုိုသတင်းတွေကုို ဖတ်ချင်ကြတယ်။ သူများရင်ဆုိုင်နေရတာတွေကုို ကိုယ့်ပြဿနာလို သဘောထားပြီး သိချင်စပ်စုကြတယ်။ ၁၉၉၀ခုနှစ်လောက်က O.J. Thompson (အုိုဂျေ သောမဆင်) လူသတ်မူတစ်ခုရဲ့ တရားခွင်ကုို သတင်းရေးကြတာကို လူတွေက စိတ်ဝင်တစား စောင့်ဖတ်ကြတယ်။ မျက်နှာဖုံးသတင်းတွေတောင် ဖြစ်လို့။ သတင်းရေးဆရာတွေ အရေးကောင်းရင်ကောင်းသလုို နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အထိ လူစိတ်ဝင်စားမူ ရခဲ့တယ်။ အသည်လုို တရားခွင်သတင်းတွေ လူကြိုက်များတာကြောင့် ယနေ့ခေတ်ဆုိုရင် တရားခွင်တီဗီဒေ့ါကွန် တောင်မှ လူဖတ်အများဆုံးစာရင်းဝင်လာပြီ။
တဖန် အရေးပါဆုံးသတင်းကတော့ အားကစားသတင်းပဒေသာပါပဲ။ တချိူ့သော လူတွေကတော့ အားကစားစာမျက်နှာဆုိုရင် ကျော်လွှားသွားကြပါတယ်။ ဒါတွေက အလကားဟာတွေ၊ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှမရှိဘူး။ သို့သော် ကမ္ဘာ့အားကစား သတင်းတွေဟာ အချိန်တွေကုန်၊ ပိုက်ဆံတွေအကုန်ခံပြီး လူတွေပါဝင်ကာ လူ့စိတ်ဝင်စားမူတွေကုို ဆွဲယူနုိုင်တဲ့ သတင်းတွေဖြစ်နေတယ်။ သတင်းစာတွေမှာ အားကစားစာမျက်နှာတွေက သတင်းအစီအစဉ်ထက်တောင် များနေတယ်။ ဒေသဆုိုင်ရာ တီဗီသတင်းတွေကုို ကြည့်လုိုက်ဦး။ အားကစားထုတ်လွှင့်မူက ပုိုသာနေတယ်။ အားကစားလွှင့်တဲ့ လုိုင်းတွေကုို ကြည့်ဦးမလား။ အားကစားလုိုင်းတွေများ လွှင့်သာလွှင့် မရှူံးဘူးဆုိုပဲ။ ကျွန်တော်တုို့ရဲ့ ပညာရေးလုိုင်းမှာ ကောလိပ် တက္ကသိုလ်က အားကစားတွေ ပါဝင်ကာ လွှင့်ထုတ်ကြပါတယ်။ အဲသည်အထဲမှာ အားကစားလက်သစ်ကလေးတွေ၊ နံမယ်ရအားကစားသမားတွေကုိုလည်း မွေးထုတ်ပေးလုိုက်သေးတာကုိုး။
တုိုင်ပြည်နဲ့ချီပြီး ကျင်းပကြတဲ့ အုိုလံပစ်အားကစားတွေဆုိုရင် အားကစားသတင်းတွေဟာ မျက်နှာဖုံးသတင်းတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ပရိသတ်အင်အားကလည်း ဒေသတွင်းရော၊ မြို့တွင်း မြုို့ပြင်ပါ ပါဝင်ပတ်သက်လာတယ်။ ဝေဖန်သူတွေက ပြောရာမှာ အားကစားသတင်းတွေကုို တင်ပြတဲ့အခါ အားကစားဆုိုင်ရာအချက်အလက်တွေ ကုို ဦးစားပေးသင့်တယ်၊ အားကစားနည်းစနစ်တွေကုို ပိုပြီး တင်ပြသင့်တယ်၊ လူထုစိတ်ဝင်စားအောင်ဆုိုပြီး ပရိသတ်ရအောင် ဘာမဟုတ်တာလေးတွေကုို ပုံကြီးချဲ့တာမျိူးတွေ နည်းသင့်တယ်လို့ ထောက်ပြကြပါတယ်။